Home Wararka Dilal qorsheysan oo ay dawladdu wax ka ogtahay oo Xamar ka bilowday.
Dilal qorsheysan oo ay dawladdu wax ka ogtahay oo Xamar ka bilowday.
Dilalkan qorsheysan ee Xamar goonida loogu yeelay Waxaa ku fulaya qorshayaal la hubo inay dawladdu wax ka og tahay. Haddii aad dib u baadhid marar hore ayey MOL sheegtay inay jiraan koox ilaa soddomeeya ah oo Fahad loo soo tababaray inay u fuliyaan hawllo gaar ah, sida madax jebinta. Dhinaca kale, waxaa soo baxeysa inuu jiro xiriir qarsoon oo ay dawladdu og tahay uu u dhaxeeyaa madaxda sare iyo kooxaha dilalka qarsoon soo amra. MOL waxay dabagal ku waddaa arrimahaas waxayna idii soo bandhigi doontaa dhawaan qoraallo arrintaas ku saabsan.
Diilalka Xamar ka dhacaya hadda maaha kuwa ay Alshabaab fuliyaan oo kaliya walow iska sheegan karaan, hadda waxaa jira hawgallo kale oo ka socda Magaalada Muqdisho, waxayna qeyb ka yihiin qorshooyin loogu talagalay:
In ay adkaato ku noolaanta Xamar oo nolosha ciriiri looga dhigo dadka ku nool.
In ganacsiga uu ka wareego oo u wareego gobollada ay nabaddu ka jirto.
In magaalada markale uu dagaal ehliya ka dhaco kadib markii ay kala shakiyaan dadka 3m ah ee ku wada nool.
In Dawladdu ay marmarsiiyo u hesho inay keento ciidammo Erateriyaan ah oo si arxan darra ah wax u gumaadi doona oo lagu sheegi doono inay ammaana wax ka qabanayaan iyadoo ciidankii qaranka loo dirayo inay Baydhabo soo gubaan.
Dilalakan si fiican mid waliba ugu fiiri ma jiro wax xiriir ah oo ay isla leeyihiin oo aan ka ahayn kicin, Cabsiin iyo u gogol xaaarid ujeedo fog. Madaxweynaha iyo R/Wasaaraha midna kama hadlo waayo waa hawl ay wax ka ogyihiin oo aysan ka naxayn dhicideeda, xataa kama taciyeeyaan. Waxaa la mid ah guddoomiyaha Gobolka oo lagu yiri afkaaga hayso.
Bal waa kuwan ee nala arag inta aad nabad beenaadda ku nooshahay ee aan laguu iman.
5/Nov/2018: Safiya C/raxmaan Maxamuud oo aheyd Gabar Dhalinyaro ah ayaa Askari ka tirsan ciidanka dowlada ku diley Xafaadda Buulaxuubey ee Degmada wadajir.
6/Nov/2018:Afar Ruux oo shacab ah ayaa Ciidamadda AMISOM Waxaa ay si bareer ah ugu dishey Isgoyska Ex-Koontarool Balcad ee Muqdisho.
8/Nov/2018:Xildhibaan C/weli Maxamed Ibraahim oo ka tirsanaa Mamaulka Hirshabelle iyo Darwalkiisa ayaa geeriyooden kadib Markii gaari ay wateen loogu xirey waxyaabaha qarxa kaasi oo ka dhacay agagaarka Beerta-Nabadda ee Muqdisho.
9/Nov/2018:Ugu yaraan 30 qof ayaa geeriyootey halka ku dhawaad Boqol qof ay dhaawacmeen kadib Markii Sedax qarax iyo weerar lagu qaadey Hotelka saxafi ee Muqdisho, Weerarka iyo qaraxyadaas waa sheegtay Al-shabaab.
10/Nov/2018:Koox hubeysan oo wateen gaari ayaa dad ka soo laabtey meyd ay ku soo aasen duleedka muqdisho ku horjareen gaarigooda iyaga oo rasaas ku furey. Waxaana geeriyoodey hal ruux halka mid kalena uu dhaawacmey.
10/Nov/2018:Koox hubeysan ayaa deegaanka weydoow ee duleedka muqdisho ku dileen Nin ka tirsanaa Ergadii doorashada K/Galbeed, kooxda dilka geysatey ayaa goobta isaga baxsadeen.
12/Nov/2018:Koox hubeysan ayaa degmada waaberi ku dishey wiil dhaliyaro ahaa kaasi oo magaciis alagu soo koobey Deeqow, waxaana uu ka tirsanaa shaqaalaha mamaulka degmada waaberi.
13/Nov/2018:Koox Hubeysan Ayaa Isgoyska Baar-Ubax ku dishey Daahir Nuur Karaane oo ka tirsan Shaqaalaha Hormuud Teleocm, Halka mid kalena la dhaawacay.
15/Nov/2018:Koox Hubeysan ayaa Xaafadda Seybiyaano ee degmada hodan ku dishey Nin lagu magacaabi jirey Garaad Yaasiin, Kooxda dilka geysatey ayaa goobta isaga baxsadeen.
15/Nov/2018:Koox Hubeysan ayaa xilli maqrib ah waxaa ay nin odey ahaa oo lagu magacaabi jirey maxamed xasan raage ku dishey xaafadas kadib markii uu ka soo baxay masjid uu salaadda ku soo tukadey, Kooxdii dilka geysatey ayaa isaga baxsadeen goobta.
15/Nov/2018:Koox Hubeysan ayaa xaafadda Laba-dhagax ee degmada warta-nabada ku dishey wiil dhalinyaro ahaa, waxaana goobta isaga baxsadeen kooxdii dilka geysatey.
18/Nov/2018: Hal Asraki ayaa geeriyoodey kamdi Markii Ciidamo ka tirsan amisom qarax lagula eegtay Xafaadda Suuqa Xoolaha, halkaasi oo ay marayeen.
18/Nov/2018:Laba Qof oo mid kamid ah yahay darawal ka xeeyanaya Gaari ay saarnaye ciidamo ka tisane dowlada ayaa geeriyoodey kadib markii qarax dhulka lagu aasey uu ka dhacay deegaanka Km13 ee Duleedka Muqdisho.
18/Nov/2018:Koox hubeysan ayaa xilli maqrib ah waxaa ay isgoyska bakaaraha ku dishey askari ka tirsanaa ciidanka dowladda gaar ahaan Guutada 14-Oktoobar.
19/Nov/2018:Koox hubeysan ayaa xilli maqrib ah waxaa ay isgoyska fagax ku dishey askari ka tirsanaa ciidanka dolwada kaasi oo lagu magacaabi jirey Axmed Nuux, kooxda dilka geysatey ayaa goobta isaga baxsadeen.
20/Nov/2018:Askari ka tirsanaa ciidanka dowladda oo lagu magacaabayay Xasan Kaafi ayaa ku geeriyoodey kadib qarax loogu rixey gaari uu watay, Qaraxa ayaa ka dkacay Xaafadda Soona-keey ee degmada hodan.
21/Nov/2018:Koox hubeysan ayaa Isgoyska bakaaraha ee muqdisho waxaa ay ku dileen laba nin oo la sheegay in ay ka tirsanaayen shaqaalaha shirka Hormuud, Kooxda dilka geysatey ayaa goobta isaga baxsadeen.
24/Nov/2018:Koox Hubeysa ayaa Xilli Fiid ah waxaa ay askari ka tirsan ciidanka dowladda ku dishey isgoyska Black Sea ee Degmada Hodan.
25/Nov/2018:Koox Hubeysa ayaa salaadii Maqrib kadib Degmada shibis waxaa ay ku dishey Deeqow oo ka tirsanaa Askarta dowladda soomaaliya.
26/Nov/2018:Sideed qof ayaa geeriyootey kadib markii gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay uu ku qarxay suuq ku yaal xaafadda kaawo-godeey ee degmada wadajir.
27/Nov/2018: Koox Hubeysan ayaa agagaarka carwadii hore ee qaranka oo ku taal taleex waxaa ay ku dishey askari lagu magacaabi jirey cabdi maalik, kooxda dilka geysatey ayaa goobta isaga baxsadeen.
27/Nov/2018:Haweyney Xaamilo aheyd ayaa xilli habeen ah waxaa toorey ku diley ninkeeda kadib markii muran uu soo kala dhaxgalay, dilka ayaa ka dhacay Xaafadda Jaamacada ee degmada Hodan.
30/Nov/2018:Koox hubeysan ayaa laba wiil oo dhalinyaro ah ku dishey xaafadda daaru-salaam ee muqdisho, kooxda dilka geysatey ayaa goobta isaga baxsadeen.
Previous articleZakariye Maxamud Xaaji Cabdi oo lagu tilmaamay Khaa’in waddan
Next articleMW Farmaajo iyo Gud. Mursal oo isku mar la Kulan albaabada u xiran yihiin oo ka socda Villa Somaliya
Sababta rasmiga ah ee ay ciidanka uga soo baxeen furimaha &...
Beesha Caalamka oo kulan deg deg ah ku jira, kana fakaraya...